Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): December 2016
The cries and trauma of native civilians of Northern Burma
at 12/29/2016 09:24:00 PM
ဌာ​နေပြည်​သူ​တွေရဲ့ ငို​ကြွေးသံနဲ့ နာကျည်းမှုများ
An old Kachin mother from Zai Awng Refugee Camps, near Laihpawng is crying and she said "I want to go to Laihpawng, I want to die, how shall I do now!!!"
There are so many civilians are crying like that. How can we understand the right of te native people. As far as we know, the native ethnic people had never given any troubles to the Burmese in their land like that. Now we have to take so much time to cure the hatred and trauma of the native ethnic people.
ဇိုင်း​အောင်​ စစ်​​ရှောင်​စခန်းမှ ထပ်​မှန်​ထွက်​​ပြေးရတဲ့ အသက်​ကြီးပြီဖြစ်​​သော အ​မေအိုရဲ့ ငို​ကြွေးသံ "ငါလိုင်​​ဖောင်​ကိုသွားချင်​တယ်​၊ ငါ​သေချင်​တယ်​။ ငါဘယ်​လို လုပ်​ရမှာလဲ?"
ဒီလိုငို​ကြွေးပြီး ငိုယို​နေတဲ့ တိုင်​ရင်းသား​တွေ အများကြီးရှိ​နေတယ်​။ ဌာ​နေတိုင်းရင်းသားများ ဗမာပြည်​ကိုလာပြီး ဒီလိုဒုက္ခပြသမာ​တွေ မ​ပေးဖူး​သေးပါဘူး။ ဒီ​နေရာ ဒီ​မြေဟာ ဗမာ​တွေ ဘာဖြစ်​လို့ဒီ​လောက်​​တောင်​ လာ​သောင်းကျန်း​နေတာလဲ။ ဒီနာကျည်းမှု​တွေကို အချိန်​အ​တော်​ကြာ​အောင်​ ပြန်​လည်​ကုသမှ ရ​တော့မယ်​။
at 12/27/2016 09:00:00 AM
DU Seng Aung
Grai pyaw ai.
Grai n.gun lu ai.
Miwa mung Dan nga, Chyurum Wunpawng yu-ngwi ninghkring ni,
Anhte K.I.A/ K.I.O share ninghkring ni hpe shagrau da ai mahkawn re.
Sai ga shaga ai Mahkawn re,
Madat n.gun la ga.
The Innocent civilians were seized by Myanmar Military Tatma 99
at 12/25/2016 08:01:00 PM
အပြစ်​မဲ့ပြည်​သူများအား တပ်​မ ၉၉ မှ အ​ကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီး
ယမန်​​နေ့ ၂၀၁၆ ဒီဇင်​ဘာလ ၂၄ ရက်​​နေ့တွင်​ ပန်​ဆိုင်းမြို့အနီးရှိ အပြစ်​မဲ့ခလျန်​ရွာသားများကို မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​ တပ်​မ ၉၉ မှ အ​ကြောင်းမဲ့ ဥပ​ဒေမဲ့ဖမ်းဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွား​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။ ဖမ်းဆီးခံရ​သောရွာသားများမှာ
၁။ ဦး​ဝေါ်ဆာ အသက်​ ၃၃
၂။ ဦးငွားဆာ အသက်​ ၃၆
၃။ ဦး​လောဖာ အသက်​ ၃၃
၄။ ဦး​ယောချင့်​ အသက်​၃၂
ထို့ပြင်​ လွန်​ခဲ့သည်​အပတ်​တွင်​ နမ့်​အွန်​ရွာသား ဦး​ယော်​ထုန်​ကိုလဲ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​မှ ဖမ်းဆီး​ခေါ်​ဆောင်​သွားရာ ယခုအခါ မည်​သည့်​​နေရာသို့ ​ရောက်​ရှိ​နေသည်​ကို မသိဘဲ ​ဖြစ်​​နေပါသဖြင့်​ မိသားစုများမှ အလွန်​အမင်း စိုးရိမ်​လျက်​ရှိ​နေပါသည်​။
Yesterday, on 24 December, 2016, (7) innocent civilians from Hkalen village, near Bangsai were seized by Myanma Tatmataw Tatma 99 without any reason or rule of law. They are
1) Slg Wo Sa (Male, age 33)
2) Slg Ngar Sa (Male, age 36)
3) Slg Lau Fa (Male, age 34)
4) Slg Yau Chin (Male, age 32)
5) Jan. Bya Mar Sar (Male, age 30)
6) Jan. Gaw Tar Mi (Male, age 52)
7) Shayi Li Mi (Young girl, age 12)
A week before,acivilian name Maru Yaw Htung was also arrested by the Myanmar military. Up to now, no one know where he was taken to and how he was kept by the military.
မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​မှ အစုလိုက်​အပြုံလိုက်​ သတ်​ဖြတ်​​ဖျောက်​ စစ်​ရာဇဝတ်​မှုကျူးလွန်​
မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​နဲ့ ​​မြောက်​ပိုင်းဌာ​နေ တိုင်းရင်းသားများမဟာမိတ်​များ တိုက်​ပွဲဖြစ်​​နေစဉ်​ကာလအ​တောအတွင်းတွင်​ အပြစ်​မဲ့ နမ့်​​ခေ​ဟော့ ရွာသား ၁၈ ဦး (အသက်​ ၂ နှစ်​အရွယ်​ က​လေးငယ်​ပါအဝင်​) သည်​ မြန်​မာ့တပ်​မ​တော်​၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံလိုက်​ရပါသည်​။ ၄င်းရွာသားများသည်​ မြန်​မာ့တပ်​​တော်​သားများ၏ ရက်​ရက်​စက်​စက်​နှိပ်​စက်​​ သတ်​ဖြတ်​ မီးရှို့ဖျောက်​ဖျက်​ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်​။ တိုက်​ပွဲအပြီး နိုဝင်​ဘာလ ၂၀ရက်​​နေ့တွင်​ ၄င်းရွာသားများ၏ အရိုးပြာများကို ကျင်းတစ်​ကျင်းထဲ၌ စုပြုံမြုပ်​နှံထား​ကြောင်း ရွာသားများ ပြန်​လည်​တူး​ဖော်​​တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်​။ ပျောက်​ဆုံး​နေဆဲ ရွာသားများကိုလဲ ဆက်​လက်​ရှာ​ဖွေလျက်​ရှိ​ကြောင်း သိရှိရပါသည်​။
During the fighting between Myanmar Troops and the northern alliance, the 18 innocent male civilians (including2years old aged child) from Nam Khye Ho village were seized by the Burmese Troop. The victimized civilians were tortured and killed. After the fighting, on 20th November, 2016, the villagers had found that the victimized civilians' bodies were totally burned into ashes and burried inasingle hole as seen in the following pictures. Nam Khye Ho villagers are searching the civilians those who are still lost now.
5 children are seriously injured by 105 Motor Shelled by Myanmar Tatmataw
at 12/24/2016 12:18:00 PM
နမ့် ဖတ် ကာ အ ခြေစိုက် ခလရ ၁၂၃ မှ ၁၀၅ မမ ပစ် ခတ် မှု ကြောင့်ကလေး ၅ ဦး ပြင်းထန် ဒဏ် ရာရ
This morning, at 10:00 am, on 24 December, 2006, Myanmar military No. 123 battalion based in Nampaka, Kutkai township had shelled 105 MM motor over Namphalun village three times which is on the highway road Kutkai to Nampaka. The motor hit the house of Lau Shin and5innocent childrens from Namphalun village were seriously injured. Now the injured children were taken to Kutkai township hospital for treatment.
၂၄၊၁၂၊၂၀၁၆ ရက် နေ့ နံနက် ၁၀း၀၀နာင်္ရအချိန် တွင် ကွတ် ခိုင် မြို့နယ် နမ့် ဖတ် ကာ အ ခြေစိုက် မြန် မာတပ် မ တော် ခလရ ၁၂၃ မှ ကွတ် ခိုင် နမ့် ဖတ် ကာ ကားလမ်းမ ပေါ်ရှိ နမ့် ဖလွန် ရွာသို့ ၁၀၅မမ မော် တာ ဦးတည် ရာမဲ့ ၃ကြိမ် ပစ် ခတ် ခဲ့သည် ။ တစ် လုံးသည် နမ့်ဖလွန် ရွာသား ဦး လောရှင် အိမ် ကို ထိမှန် ခဲ့ရာ အပြစ် မဲ့ က လေးငယ် ၅ ဦးပြင်းထန် စွာ ဒဏ် ရာရခဲ့သည် ။ ၄င်းဒဏ် ရာရ က လေးငယ် ၅ဦးအား ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင် စေရန် ကွတ် ခိုင် ဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင် လိုက် ပြီ ဖြစ် ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ။
Urgent Appeal by Civil Society and Organisation Kachin and shan state,December 20 ,2016
at 12/21/2016 11:47:00 AM
Additional Endorsed List this morning till 7:00 PM with Khon Ja
Kachin Development Networking Group – KDNG
Pyin Nya Daga,
Kanbawza Social Group Moagaung,
Momauk Women Group,
Kachin Women Union,
Kachin Women Association,
Technical Advisory Team (Civilian Desk)
Our Lovely World – Taunggyi
Mizzima Hnalone Thar (Loikaw, Kayah State)
Philip Tun Hla Aung – Yangon - CSO
Diana Lazing Seng Hkawn – Yangon – Psychologist
Darun Aung Naw Sann – Yangon - CSO
Ong Lahpai - Denmark
readmore++++click on link
ဗမာ့တပ်မတော် ပြည်သူတွေရဲ့ အိုးအိမ်တွေကို အခုလိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါတယ်
at 12/13/2016 09:45:00 AM
Raw La Raw's post.
The U.S. Embassy is deeply concerned by the escalating violence in Kachin and Shan State and reports of abuses against civilians.
ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် အကြမ်းဖက်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေကြောင်းနှင့် အရပ်သားများအပေါ် မတော်မတရား ပြုလုပ်နေမှုသတင်းများကြောင့် အမေရိကန်သံရုံးအနေဖြင့် များစွာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ကြရေးနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပဋိပက္ခကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရသူအားလုံး လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ အမြန်ဆုံးနှင့် အဟန့်အတားမရှိရရှိနိုင်ရေးတို့အတွက် မိမိတို့ ဆက်လက်တောင်းဆိုပါသည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများကြောင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ခု အောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ယုံကြည်မှုများကို လျော့ပါးအားနည်းစေပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့၏ ဘဝများအပေါ် အချိုးမမျှတစွာ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေ၍ ထောင်နှင့်ချီသော IDPs များကို ၎င်းတို့၏ အိုးအိမ်များမှ အတင်းအကျပ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးစေရာ ရောက်ပါသည်။ ရန်လိုမှုများ အမြန်ဆုံးရပ်စဲကြပါရန် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို အမေရိကန်သံရုံးက တိုက်တွန်းပါသည်။ သုိ့မှသာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေး အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် အရေးကြီးသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
The U.S. Embassy is deeply concerned by the escalating violence in Kachin and Shan State and reports of abuses against civilians. We continue to call for restraint from all sides and urge immediate, unfettered humanitarian access to all those affected by conflict throughout the country. Continued conflict undermines the trust necessary to achieveadurable peace, and disproportionately affects the lives of innocent civilians and the thousands of IDPs forced from their homes. The U.S. Embassy urges all sides to cease hostilities so that the important effort to achieve peace can move forward.
at 12/13/2016 09:35:00 AM
Sr.Steven ( Naw Awng ) Advocacy Trip to Washington D.C.
အမေရိကန်အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအပေါ် စီးပွားရေး (sanction) များ ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု များပြားလာမည်ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်တွင်းစစ်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေခြင်းအပေါ်ဆက်လက်ပါဝင်ကူညီအားပေးပါရန် သဘာဝသယံဇာတနှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊ ပြည်သူလူထုအတွက် နစ်နာဆုံရှုံးစေနိုင်သော ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများသည် ပဋိပက္ခများကို ဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးပြသနာပြေလည်သည့်အထိကြီးမားသောရင်းနှီးမြှပ်နှံမမှုများကို ဆက်လက်ဆိုင်ငံ့ထားသင့်ကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရထံ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
Gadai galaw nga ai kun? Gadai lit la nga ai kun? Naw karum la marit looooooo!
at 12/06/2016 11:29:00 AM
Ya hte Hkngga gying ai Saranum langai mi gaw, Mungmyit Sinli ga hta byin ga ai majanamarangebyin wa ai buga masha ni katut sha nga ai, shinggyim ahkaw ahkang hte shinggyim tara tawt lai nna, dip gamyet zingri sat hkrum ai lam ni hpe gara hku karum na lam, bawngban ga nga jang, Mungmyit Sinli kaw nna gadai n pru wa ai nga tsun da ai.
Galaw ra ai lam ni:
1) Buga masha niamachyi hkrat sum mat wa sai lam ni hpe shiga hta ra ai.
2) Mara galaw ai ni hpe Tara upadi hte maren mara shagun ahkyak la ra ai.
3) Ndai shiga lam ni hpe Miwa Atsuya, Myen Atsuya, ASEAN, EU, UN, American Atsuya, Bristish Atsuya ni chye hkra galaw mat wa ra ai.
Ya ndai shinggyim rapra lam ni hpe lu la hkra gadai gaw lit la nga ga ai kun?
Galaw ai ni galaw nga ma ai ngu nna kam hkat let yu shalai taw nga ga ai kun?
Ngai shadu yang Mungmyit Sinli ga kaw, chye ai ni sha gaw buhtawt ma nna, nga ai ni sha gaw bungli masum mali galaw taw di kyin taw nga sai kun!!
Shing n rai ngai hte n seng ai nga nna, lagyim rawng ma sai kun!!! N chye sai.
Bai wa marit loooo!!! Chye ai ni naw wa marit looo!!! Naw wa karum la marit!!!!
Nang kaw nga taw ai ni hpe sha gaw mara hkum shagun taw nga manu!!!
N chye ai ni sha she nga nga taw nga ga ai.
at 12/05/2016 11:13:00 AM
ဗမာတို့က #ရခိုင်တို့အပေါ် ဆင်နွှဲခဲ့သော အမျိုးပြုတ် သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း ဗမာ (မြန်မာ) တို့၏ ကျူးကျော်စစ်ကို (၄၅) ရက်ကြာကြာ ခုခံတိုက် ခိုက်ပြီးနောက် (၁၇၈၄) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်ကြီးနှင့်တကွ ရုပ်ရှင်တော်မဟာမြတ်မုနီ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်။ ဗမာမာများ သည် ရခိုင့်ရွှေနန်းတော်၊ ပိဋကတ်တိုက်တော်၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကြီး (၃၀)၊ အငယ် (၃၀၀၀) ကျော်ကို မီးလျှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ရခိုင်တပြည် လုံး ဖူးဖူးရောင်သော လူသေကောင်များဖြင့် ပြန့်ကြဲလျှက် ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) ကျော် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် နေထိုင် လာခဲ့သော ရခိုင်နိုင် ငံတော် ၌ တိုင်းသား ပြည်သူများမှာ ကူမည့်သူမရှိ လွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြရသည်။ မြန်မာများသည် ပုခက်တွင်းရှိ ကလေး သူငယ်များ ကိုမချန် သတ်ဖြတ်သည်။ ရခိုင်မှတ်တမ်း၌ (“အချေသူငယ်၊ အစိတ်ကေရို့၊ ပြုံးရယ်ရွှင်ဘိ၊ မိမသိကို၊ မွီးမိထံမှ၊ ယူပြီးမှလျှင်၊ လက်ကို ကိုင်မြှောက်၊ ကောင်း ခင်ရောက်က၊ အောက်မှတဖန်၊ ဓါးကိုလှန်၍၊ ခံပြန်ပြုခါ၊ မြှောက်လီမှာလျှင်၊ ကျလာမလွဲ၊ နှစ်စိပ်ကွဲ ၍၊ ရဲရဲသွီးစက်၊ အအူထွက်၏။တချက်မြီ၌၊ လှံကိုစိုက်၍၊ လံလိုက်တုံလျှင်၊ ရင်ကဝင်၏”) ဟူ၍ တွေ့ရပါသည်။ အသတ်ခံခဲ့ရသော ရခိုင်သားများကို “တင်းဝပန်းခိုင်၊ တမြိုင်မြိုင်၊ ရခိုင်လူ အလောင်း” ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။
ဂဏန်းသင်္ချာအလို (၇) သန်းကျော်သည်။ မြန်မာများသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ကို အစွဲပြု၍ ဂေါင်းပုံပြင် (မြောက်ဦး)၊ လူသတ်ဂျိုင် (မြောက်ဦး)၊ ရေတက်ရေ ကျသောအခါ သောင်ပြင်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချည်းနှောင်၍ သတ်ခဲ့သောကြောင့် ရေအကျတွင် ဖြူနီသောအလောင်းကောင်များ ကို မြင် ရသောကြောင့် ပေါက်ဖဲ့ရွာ (မန်အောင်၊) လက်များကိုဖြတ်၍ တောင်နှယ်ပုံထားသောကြောင့် လက်ပုံတောင် (မာန်အောင်)၊ ရေကန်တွင် လူအပြည့် သတ်၍ ပုံထားသော ကြောင့် သီဘေးကန် (ပေါက်တော)၊ ကလေးငယ်များကို ရေကျရေတက်ချိန်တွင် ခြံလှောင်၍သတ်ခဲ့သော ကြောင့် ခြံလှောင်ချောင်း (မာန်အောင်)၊ ခြံပြင် (မောင်တော)၊ သွေးချောင်း (တောင်ကုတ်)၊ လူ့အသားတစ် များကို ခုတ်ဖြတ်၍ပုံထားသောကြောင့် အသား ပုံရွာ (ပုဏ္ဏားကျွန်း) စသည့်စသည့်ဖြင့် နာမည်တွင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း (၄၀) လုံးလုံး ရခိုင်မျိုးတုံးအောင် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ မာန်အောင်မြို့ တမြို့တည်း တွင် အသတ်ခံခဲ့ ရသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်မှာ “လူငယ်တသောင်း၊ လူကြီးပေါင်းမူ၊ သျှစ်သောင်းအစွန်း၊ တသိန်းမှန်း၏၊ မယွန်းထိုခါ၊ သီကုန်ပါ၏၊ သိမ်းကာယူက၊ ပြည်အင်းဝသို့၊ ပါရလီငြား၊ လူယောက်ျားနှင့်၊ မပြားမှန်ထ၊ လူမိန်းမကို၊ ရွီကြလီသော်၊ နှစ်သိန်းကျော်၏၊ ကြားသော်မြင် ခါ၊ ကြောက်ဖွယ်သာတည်း” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (၁၈၂၆) ခုနှစ် ဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်ရသောအခါ မြန်မာ(ဗမာ) လက်အောက် နှစ် (၄၀) ငရဲ စခန်းသည် တခန်းရပ်ခဲ့သည်။ ကျူးကျော်သူမြန်မာများကိုမောင်းထုတ်၍ အင်္ဂလိပ်တို့က တဖန်အုပ်ချုပ် သည်။ သို့သော်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ လူမကျန်တော့ပေ။ ရခိုင်နိုင်ငံတော် တခုလုံးသည် သုသာန်တစပြင်ပမာ တောကြီး မျက်မဲဖြစ်နေလေတော့ သည်။ အင်္ဂလိပ်အကာ အကွယ်ကြောင့် သေကံ မရောက်သတ်မပျောက်ပဲ ရခိုင်တချို့ ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ကျန်ရစ်သည်။
ထိုသူများထဲမှ (၅) သောင်းခန့်ကို ပြန်ခေါ်ယူ၍ ရခိုင်ပြည်၌ ပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ သခင်ပြောင်းသော ကျွန်ဘဝသည်ပင် ရခိုင်တို့အဖို့ ကံထူးကံမြတ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာများ၏ လူမျိုးရေးမုန်း တီးမှုဖြင့် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလား။ ကျွန်ဘဝတဖြစ်လဲ ကိုပင် ရခိုင်တို့က “ခေတ်ကောင်းခါကယင်” ဟူ၍ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ မှန်ပေသည် မြန်မာလက်အောက် နှစ် (၄၀) လုံးလုံး ဒုက္ခရောက်နေသော ရခိုင်သားများသည် ရေနှစ်တုံးဆွဲမိသကဲ့သို့ အသက်ရှူဖြောင့်ခဲ့ ရသည်။ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ် ပြန်နေခွင့်ရခဲ့သည်။ တနည်းဆိုရလျှင် ဗြိတိသျှတို့၏ အကာအကွယ်ကို ရခိုင်တို့ ရသည်။ ရခိုင့်စာပေ ပြန်လည်အညွန့်ထောင်လာနိုင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိသဖြင့် အတော်အသင့် ချမ်းသာလာကြသည်။ခေတ်ပညာကိုလည်း သင်ကြားခွင့်ရလာသည်။ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် ရာထူးကြီးများကို ရခိုင်သားများ ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု အိုင်စီအက်စ် ဦးကျော်မင်းက မှတ်တမ်းရေးဖူးခဲ့သည်။ ရခိုင်ကျွန်သက် (၁၀၁) နှစ် တင်းတင်းပြည့်သောနေ့ (၁၈၈၆) ခု၊ ဇွန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဗမာ တစ်ပြည်လုံး အင်္ဂလိပ်လက်အတွင်းသို့ ကျရောက်ရသည်။ ဝဋ်ကြီးပြန်လည်သည်။
ရခိုင့်အမျိုးသား ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် မြန်မာပြည်၌ လွတ်လပ်ရေးမျိုးစေ့ကို ဦးစွာပထမအစချခဲ့သည်။ ဝံသာနုစိတ်ဓါတ် ကို နိူးဆွပေးခဲ့သည်။ အကြိမ်ကြိမ်ထောင်ကျ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ရခိုင့်ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာများနှင့်တန်းတူ ကြိုးပမ်းခဲ့ သည်။ အချောင်မခို ချောင်မခိုခဲ့ပါ။ မင်းသားကြီးရွှီးဘန်းသည် အင်္ဂလိပ်ကို စတင်တော်လှန်ရန်ကြိုးပန်းသည်။ဤသည် ကို မြန်မာမှတ် တမ်း၌ မရှိ။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို ရခိုင်က အရင်တော်လှန်ခဲ့သည်။ (၁၉၄၅) ခု၊ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ မြန်မာက ဂျပန်ကို တော်လှန်သောအခါ ရခိုင့်ပြည်တွင် ဂျပန် မရှိတော့ပါ။ ရခိုင်တို့သည် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး တော်လှန်ခြင်းဖြစ် သည်။ဗမာတပ်မတော်မှ ရိုင်ဖယ်တလက် အကူအညီမယူပါ။ ဂျပန်အဆုတ် တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ရခိုင်ပြည်သို့ရောက်လာသည်။ဦးစိန္တာကျင်းပသော ကြာအင်းတောင်ညီလာခံကို တက်ဖြစ်သည်။ အလံနီပါတီမှ ဦးအောင် သန်း က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲသည်။ (အသေးစိပ်ကို ဘုံပေါက်သာကျော်စာအုပ်တွင်ဖတ်ပါ။) စစ်တွေကြက်ကိုင်း တန်တွင် “ရခိုင်တကျပ်၊ ဗမာတကျပ်၊ သျှမ်းတကျပ်၊ ဗမာတကျပ်” တရားကိုဟောသည်။ စည်းရုံး၍မရသဖြင့် “မြွေပွေးနှင့် ရခိုင်ကိုတွေ့လျှင် ရခိုင်ကို အရင် သတ်ရမည်” ဟု မြန်မာပြည်တွင် ဝါဒဖြန့်သည်။ သခင်စိုး၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ကွန်မြူနစ် အဖွဲ့များကလည်း ဆရာတော်ဦးပညာသီဟအား ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရလျှင် ရခိုင်ကိုလည်း လွတ်လပ် ရေးပေးမည်။
မန္တလေးမဟာမုနိကိုလည်း ပြန်ပေးမည်ဟုလိမ်သည်။ ညာဏ်တုံးသော ရခိုင်ခေါင်းဆောင် များက မြန်မာများလှည့်စားတာကို ယုံကြည့်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရလာသည်။ သို့သော် ဗမာ့ လွတ်လက်ရေးသာဖြစ်သည်။ ရခိုင်နှင့်မဆိုင်ပါ။ သျှမ်းနှင့်မဆိုင်ပါ။ မွန်နှင့်မဆိုင်ပါ။ ကရင်နှင့်မဆိုင်ပါ။ တိုင်းရင်းသားများကို ကလိမ်ကကျစ်လုပ်၍ရယူခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးဖြစ်သည်။ ဗိုက်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသော ရခိုင်တကျပ်-မွန်တကျပ်။ သျှမ်း တကျပ်-ဗမာ တကျပ်များသည် တိုင်းရင်း သားတကျပ်-ဗမာအားလုံးဖြစ်လာသည်။ တိုင်းရင်းသားများ တကျပ်တကျပ်စီရသောအခါ မြန်မာ (၇) ကျပ် အိပ်ဝင်သပိတ်ဝင် ပင့်သကူအချောင်ရသည်။ တနည်းပြောရလျှင် ရခိုင်တို့သည် မြန်မာများအောက် နောက်တကြိမ် ကျွန်ဇာတ် အသွင်းခံလိုက် ရသည်။ မြန်မာတို့သည် သမိုင်းစဉ်တလျှောက် ရခိုင်လူမျိုးအပေါ် မည်သည့်အခါမှ ကောင်းကျိုးမပေးခဲ့ပါ။ ဗိုလ်ရန်အောင်ခေါင်းဆောင်သော ဗမာ့တပ် မတော်သည် မောင်ဝိုင်း တပ်အပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၁၆) နှစ်အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်၌ ပထမဆုံးအခြေချ လာသည်။ (၁၉၄၂) ခုတွင် ကုလားရန် ကိုကြောက်၍ ထွက်ပြီးလာသော ရခိုင် (၄၀၀) ကျော်ကို ဗိုလ်ရန်အောင်သည် အကူအညီမပေးဘဲ သင်္ဘောကိုဖောက်၍ လုပ်ကြံလိုက် သည်။ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီ။ လွတ်လပ် သောမြန်မာပြည်တွင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်ဟုဆိုသည်။ ပါလီမန်တွင် ရခိုင်သား များ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ တင်ပြခွင့်ကားရသည်။
သို့သော် လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကားမရ၊ (၁၉၅၂) ခုနှစ်တွင် တောပန်ဇင်း၊ အခစား (ကျော်တော်)၊ မကျည်းကုန်း (မာန်အောင်) စသောရွာများကို ရွာလုံးကျွတ် သတ်ဖြတ်ပြီး ဦးနုက ရခိုင်သားများကို ဒီမိုကရေစီနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဦးနု၏ဒီမိုကရေစီသည် ရခိုင်သားများအဖို့ ခါးသီးလှ သည်။ မြောက်ဦးမြို့ နန်းရာကုန်းထက်တွင် ရခိုင်မျိုးချစ် ထွန်းလှအောင်ကို မြန်မာစစ်တပ်က ဓါးထိုးသတ်ပစ်လိုက်သည်။ ရခိုင်နိုင်ငံတော် သည် ဂျပန်ထက် အဆပေါင်းများစွာဆိုးသော ဗမာလက်အောက်သို့ တဖန်ကျရောက်ရသည်။ (၁၉၅၈) ခုနှစ်တွင် ဖဆပလနှစ်ခြမ်းကွဲ သည်။ ပြည် နယ်ပြဿနာပေါ်လာသည်။ ဦးနုခေါင်းဆောင်သော တည်မြဲဖဆလက သူ့ပါတီကိုမဲပေးလျှင် ရခိုင်ကိုပြည်နယ် ပေးမည်ဟု လိမ်သည်။ သန့်ရှင်း ဖဆပလ ဘဆွေက “ပြည်နယ်မပေးနိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျန်တဲ့ဟာကိုဘဲ ပေးနိုင်မည်” ဟု ဗြောင်တိုက် စိမ်ခေါ်ခဲ့သည်။ရခိုင်သား များသည် ပြည် နယ်အဆင့်ကိုပင် မြန်မာများထံမှ လက်ဖြန့်တောင်းခံရသော သူတောင်းစားဘဝ ကျရောက်ရတော့သည်။ ပြည်နယ်လိုချင်သော ရခိုင်သားများသည် မျက်စိမှိတ်၍ ရတညမဲအပါအဝင် အမတ်နေရာ (၉) ခုစလုံးကို ဦးနုအားပုံအောလိုက်သည်။ (၁၉၆၀) ပြည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးနုပါတီ အနိုင်ရသည်။ သို့သော် ရခိုင်သားများပြည်နယ်မရ။
ဒုတိယအကြိမ်း အလိမ်ခံခဲ့ရသည်။ ရခိုင်သားများမှာ အရှက်လည်းရ ဝမ်းလည်းကြီးရသည်။ “ဦးနု ကတိ တည်ပါစေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရင်ပေး။” ဟူ၍ သာ ငယ်သံပါအောင်အော်၍ လည်ချောင်းကွဲရသည်။ အာသီးနာသည်။ ရခိုင်က ပြည်နယ်တောင်း၊ သျှမ်းက ဖယ်ဒရယ်မူ တင်လာသောအခါ ဦးနု သည် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပေ။ နေဝင်းကို အာဏာလွှဲအပ်လိုက်ရသည်။ ဗမာများ၏ ပင်ကိုယ်ဘီလူးရုပ်ကို ပြရတော့သည်။ အောင်ဆန်း “တကျပ်” ကို နေဝင်းက လုယူလားခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဗမာက (၁၄) ကျပ်ရ၍ တိုင်းရင်းသားများမှာ “ဝ” လုံးကွင်းသည်။ (၁၉၆၇) ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၃) ရက် ဥပုသ်နေ့ စစ်တွေမြို့တွင် ရခိုင်သား (၃၀၀) ကျော်ကို နေဝင်း သတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ဘားဗူဟိယင့်၊ ဆန်ဟိယင့်၊ ဒိုင်းကျီဟိယင့် ရီယိဟင့်” ဘဝင်မြင့်သော ရခိုင်သား။ နေဝင်းလက်အောက် ထမင်းငတ်၍ သူတောင်းစားဖြစ်သည်။ (“ယခီး” ဟု အခေါ်ခံရသည်။ မြန်မာ (ဗချီး) နှင့် ရခိုင် (ယခီး) အသားစား အရေစားဖြစ်ခဲ့ရသည်။)မြဆန်စက်ရှေ့တွင် ရခိုင်သားများ ခွေးးသေဝက်သေ သေခဲ့ရသည်။
“မသေဘဲ၊ အသက်ရှိနေသူတွေ” ဆိုရင်လည်း မလွတ်။ အရှင်လတ်လတ် မြေမြှုပ်ခံရသည်။ မဆလလက်အောက် ရခိုင်တမျိုးသားလုံး စာရိတ္တ မဏ္ဍိုင်ပျက်စီး၍ ရခိုင်လူညွန့်တုံးခဲ့သည်။ ညီအစ်ကိုပါဟု ဗမာများလိမ်၍မရ။ ရခိုင်နှင့်ဗမာသည် တသီးတခြားစီဖြစ်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးသည် သမိုင်း စဉ်ဆက် ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ရာဇဝင်နှင့်လာသော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည်။ ဗမာတို့သည် မွန်ကတဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ ဗမာများ အရေးကြီး ရဟန်း ကိုးကွယ်နေချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမြစ်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်သည် ကပ္ပလီပင်လယ် ထဲသို့စီးဝင်သည်။ ကုလားတန် မြစ်သည် အင်္ဂလားပင်လယ်ထဲသို့ စီးဆင်းသည်။ ရခိုင်နှင့် ဗမာသည် မြေလည်းမတူ၊ ရေလည်းမတူ၊ (၈၈) အရေး အခင်းဖြစ်၍ ဗမာတပြည်လုံး ကျကျက်ရိုက်သောအခါတွင် ရခိုင်ပြည်ကိုလည်း ကူးစက် လာသည်။ အရေးခင်း၌ ပါဝင်ခဲ့သော ရခိုင်သား များနှင့် ထောင်ကျနေသူများပါမကျန်။ ကြိုးပေးအသတ်ခံရ သူမနည်း။
(၁၉၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပါတီ (ALD) က အမတ် (၁၁) နေရာရသည်။ ဆရာကြီး ဦးသာထွန်း ထောင်ထဲ၌အသတ်ခံရသည်။ များမကြာမီ၊ ရခိုင်ပါတီ အဖျက်ခံခဲ့ရသည်။ ရခိုင်ခေါင်းဆောင် များကို ဖမ်းဆီးထောင်ချသည်။ (NLD) ပါတီက မဲဆွယ်တရားဟောနိုင်ချိန်တွင် ရခိုင်သား မျာမှာ ယောင်၍ပင် ဟ၍မရ။ ပြောမိဆိုမိလျှင် မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ အမြင်ကျဉ်းသူများအဖြစ် တံဆိပ်အရိုက်ခံရသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော မြန်မာလူမျိုး ငယ်ဝါဒအောက်တွင် ရခိုင်သားများ၏ဘဝ စုန်းစုန်းမြုပ်ရပါတော့သည်။ (၁၉၇၄) ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို နေဝင်းက (၉၉) ဒဿမ (၇) ရာနှုန်း ထောက်ခံမှု ရသည်ဟုလိမ်၍ အတည် ပြုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက “မြွေးပွေးနှင့် ရခိုင်ကိုတွေ့လျှင် ရခိုင်ကိုအရင်င်သတ်ရမည်” ဟု ပြောသည်။ ရခိုင်စည်ရုံးရေးခရီးအပြီးတွင် ဒေါ်စုက “ကျွန်မတော့ ရခိုင်တွေကိုချမ်မိသွားပြီး” ဟုဆိုသည်။ ဘယ်သူ့ကို ယုံရပါမည်နည်း။
(၂၀၁၃) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ကျွန်သက်အနှစ် (၂၂၉) တင်းတင်းပြည့်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပညာတတ်များ စဉ်စားပါ။ ပညာမတတ် သူများ လည်း စဉ်းစားပါ။ ယခုတဖန် ရခိုင့်ကံကြမ္မာသည် အကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းထက်သို့ ကျရောက်လာပြီ။ ရခိုင့်ပညာတတ်များ၊ ပညာရှိများ၊ ပညာရှင် များ၊ ပညာမဲ့များအားလုံး သတိထားကြပါ။ ဗမာတို့ဖော်စပ်သော ဝမ်းနှုတ်ဆေးအမျိုးမျိုးကို သောက်ဖူးခဲ့ပါပြီ။ ရခိုင်တို့၏ တခုတည်းသော အန္တိမပန်း တိုင်သည်ကား ရခိုင်အချုပ်အချာအဏာ ရခိုင်လက်တွင်း ရောက်ရှိရေး ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းကိုပြောလျှင် ပဒေသရာဇ်အချင်းချင်း စစ်ခင်းခဲ့ သည်ဟူ၍သာ စကားလှဆိုသည်။ သို့သော် မြန်မာတို့သည် ပဒေသရာဇ်များသိမ်းယူခဲ့သောနယ်မြေများကို အပိုင်ရလိုနေကြသည်။ ကမ္ဘာမကျေ မသာမြေ ကြွေးကြာ်၍ ဘုရင့်နောင်၊ ကျန်စစ်သား၊ အလောင်းဘုရား စသည်ဖြင့် အခြောက်တိုက် ရန်စောင်နေတတ်သည်။ ပညာပေးရဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီး။
ဒီကနေ့အချိန်၌ ရခိုင်သား များသည် မည်သို့မျှ မတုံ့ပြန်သေးသော်လည်း မုန်တိုင်းသည် ကြိမ်းဝါးဖို့အတွက် အားယူတာစူလျှက် ရှိနေသည်။ ရခိုင်သား တို့သည် အဖရခိုင်တိုင်းပြည်ကို အင်အားစုပြီး ပြန်လည်ရယူရန် အကြိမ်းကြိမ်း ကြိုစားခဲ့သော်လည်း အချီနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီး၌ ရှိနေသော ရခိုင်သားများအားလုံး တစ်စုတည်း တစ်လုံးတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ယူပြီးမှ ရခိုင်သားတို့ပိုင်ခဲ့သော အဖတိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်းရယူ နိုင်ရေး အကြိမ်းကြိမ်း ထက်မံကြိုစားရအုံးမည်။ ရခိုင့်ပညာတတ်။ပညာရှင်တို့ စုစည်ပေးလာမှုကြောင့် အိန္ဒိယရှိ ရခိုင်သားများ၊ဘင်္ဂလာရှိ ရခိုင်သား များကို ရခိုင့်တော်လှန်းရေးတွင် ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံလာသိမ်းသွင်းရာတွင် ထင်ထားတာထက်တောင် အောင်မြင်မှုရနေတာကို ရခိုင်သားများ အသိဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဒေသမှာဘဲ နေထိုင် နေထိုင် ဘယ်နိုင်ငံသားဘဲ ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ ရခိုင်ဟာရခိုင်ပါဘဲ။ အဖရခိုင်ပြည်အတွက် ရခိုင်လူမျိုး အတွက် လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်ခါမျိုးမှာ ရခိုင့်လွတ်လပ်ရေးအတွက် လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်ခါမျိုးမှာ ရခိုင်သားအားလုံး တသွေးတသံ၊ တမိန့်တအာဏာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အဖရခိုင်ပြည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးကို အသက်ပေး ကာကွာကြရမည်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၃ ခု၊ ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်၊ ရခိုင့်နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခြင်း (၂၂၉) နှစ်ပြည့်အတွက် ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေသည်။
Copy from Myo Chit fb
The Released Statement of Northern Alliance (Burma) in order to end civil war in Myanmar.
at 12/05/2016 12:20:00 AM
မွနျမာနိုငျငံပွညျတှငျးစဈရပျစဲနိုငျရေးအတှကျ မွနျမာပွညျ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့ ထုတျပွနျကွငွောခကျြ။
၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၄) ရကျ။
释放声明北方联盟（缅甸），以内战在线 Nlamhkun awng fb
လကွေောငျးဖွငျ့ ဗုံကွဲ ဖကျြဆီးလိုကျသော မုံးကိုးမွို့ မွငျ ကှငျး အခြို့
at 12/05/2016 12:15:00 AM
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ၊ မုံးကိုးမွို့ အား မွနျမာ အစိုးရ စဈတပျ မှ
ယနေ့ (၄၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ တဈ ရကျထဲ တှငျ ဂကျြ တိုကျလယောဉျ
နှငျ့ စဈရဟတျယာဉျ မြားဖွငျ့ အကွိမျ စုစုပေါငျး (၃၅)ကွိမျတိုငျတိုငျ
လာရောကျ ဗုံးကွဲ ကာ မွို့ ပျေါ ရှိ လူနေ အိမျမြား အား အဓိက ပဈမှတျ
ထားကာ လာရောကျ ဗုံးကွဲ ဖကျြဆီး ခွငျးကွောငျ့ မုံးကိုးမွို့ ပျေါ ရှိ တိုကျ
တာ အဆောကျအဦး အမြားစု ပကျြဆီး ၊သှားပွီ ဖွဈသညျ။
ဘုရားကြောငျး နှငျ့ စာသငျကြောငျး မြားလဲ ပါဝငျကွောငျး သိရှိရပါသညျ။
အခြို့ က မီးလောငျ ပွာကြ ကုနျပွီ ဖွဈ ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
(၄၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ ညနေ ပိုငျး၌ မွငျရသော မုံးကိုးမွို့ မွငျကှငျး အခြို့)
Seng Jaw added 8 new photos — with Mg Mg Soe and 10 others.
at 12/03/2016 10:18:00 AM
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ တရုတျ-မွနျမာ နယျစပျ ၊မုံးကိုးမွို့ အား
(၂၊၁၂၊၂၀၁၆) နေ့ က စပွီး တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတျောလှနျရေး
အဖှဲ့မြား ဖွဈသညျ့ မွောကျပိုငျးမဟာ မိတျ အဖှဲ့ မှ ထိနျးခြုပျနိုငျ လိုကျပွီ
ကအေိုငျအေ တပျမဟာ(၆) နယျမွေ ၊ တရုတျ-မွနျမာ နယျစပျ ရှိ မုံးကိုးမွို့
နှငျ့ ထိုဒသေတှငျ မွနျမာ စဈတပျ နှငျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ တျော
လှနျရေး အဖှဲ့ မြားဖွဈသညျ့ မွောကျပိုငျး မဟာမိတျ တပျ မြားတိုကျပှဲ အပွငျး
ထနျ ပွနျလညျဖွဈပှား လာသညျမှာ ယခငျလ(၂၀၊၁၁၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ မှ
စတငျဖွဈပှားခဲ့သညျ ဖွဈပွီး ယမာနျနေ့ (၂၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ တိုကျပှဲဖွဈ
ပွီး (၁၃) ရကျနေ့ မွောကျမှာ တော့ မုံးကိုးမွို့ ရှိ မွနျမာ စဈတပျ ဗြူဟာကုနျး
တပျစခနျး ကွီး အား တိုငျးရငျးသား မွောကျပိုငျး မဟာမိတျ တပျမြား ဘကျမှ
ထိနျးခြုပျ ထားလိုကျ နိုငျ ပွီ ဖွဈ ကွောငျးသိရှိရပါသညျ။မွနျမာစဈတပျ ဗြူဟာ
ကုနျးအား မွောကျပိုငျးမဟာမိတျတပျမြား မှ ဝငျရောကျ ထိနျးခြုပျ နိုငျသျော
လညျး မွနျမာ စဈတပျ၏ ဗြူဟာမှူးကိုတော့ ဖမျးဆီး နိုငျခငျြး မရှိပါ ၊၎င်းငျးမွနျမာ
တပျ၏ ဗြူဟာမှုးမှာ တိုကျပှဲ စတငျ ဖွဈပှားသညျ့ (၂၀၊၁၁၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ မှ
စတငျပွီး တရုတျ နိုငျငံ ထဲ သို့ ထှကျပွေးသိနျးရှောငျသှားပွီ ဖွဈကွောငျးသိ
မုံးကိုးမွို့ အား ၎င်းငျး မွနျမာစဈတပျ ဗြူဟာကုနျး နှငျ့ ကှတျခိုငျပွညျသူ့ စဈ ၊မုံးကိုး
ပွညျသူ့ စဈ အဖှဲ့ တို့ မှ အုပျခြုပျ ခယျြလှယျနေ သညျ ဖွဈပွီး ယခု တိုကျပှဲ တှငျ
မွနျမာ စဈသားမြားအပါအဝငျ ကှတျခိုငျပွညျသူ့ စဈအဖှဲ့ မှ အရာရှိ အခြို့ နှငျ့
နောကျလိုကျမြားအား လကျနကျနဲ့ အတူ အရှငျဖမျးဆီးရမိထားကွောငျးလညျး
(၂၊၁၂၊၂၀၁၆ ) ရကျနေ့ တှငျ မွနျမာ စဈတပျ မှ လကွေောငျးဖွငျ့ မုံးကိုးမွို့
ပျေါ ရှိလူနေ တိုကျတာ အဆောကျအဦး မြားအားအဓိက၊ပဈမှတျထားကာ
ဂကျြတိုကျလယောဉျမြား၊ တိုကျရဟတျယာဉျမြားဖွငျ့ နံနကျ (၉း၃၀)မှ ညနေ
(၄း၃၀)နာရီခနျ အထိ စုစုပေါငျး ဂကျြ နှငျ့ ရဟတျယာဉျ (၅,၆)စီးဖွငျ့ (၉)ကွိမျ
ထကျမနညျး လာရောကျဗုံးကွဲ တိုကျခိုကျခွငျးကွောငျ့ မွို့ တှငျးရှိ စသငျကြောငျး
မြား လူနအေိမျအမြားအပွား မီးလောငျ ပကျြဆီး သှားပွီ ဖွဈသညျ။ဒသေခံ
မြားမှ မုံးကိုးမွို့ ၏ တဖကျကမျးရှိ အိမျနီးခငျြး တရုတျ နိုငျငံ မာနျဟိုငျးမွို့သို့
သှားရောကျခိုလုံ နရေ ပါသညျ။
မွနျမာ စဈတပျ သညျ မုံးကိုးမွို့ အား လကျလှတျလိုကျရ ပွဈ ဖွဈသောကွောငျ့
(၃၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ မှ စပွီး မုံးကိုးမွို့ အား လကွေောငျး ဖွငျ့ အကွီးအကယျြ
လာရောကျ ဗုံးကွဲ ဖကျြဆီး မညျ ဖွဈကွောငျး တရတျ ဖကျခွမျးမှ လာသေား
သတငျးမြားအရသိရှိရပါသညျ။(အတညျ မပွု နိုငျသေးသညျ့ သတငျးမြားအရ
မွနျမာ စဈတပျမှ ဓါတု လကျနကျမြား သုံးမညျ ဟုလညျး သတငျးမြား ထှကျနေ
သို့ ဖွဈ၍ တရုတျ အစိုးရ သညျ မာနျဟိုငျးမွို့ ရှိ၎င်းငျးတို့၏ နိုငျငံသားမြား အား
လုံးကို (၂၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျည တှငျးခငျြး မာနျရှီမွို့ သို့ ကားကွီးမြားဖွငျ့ လာ
ရောကျ သယျဆောငျရှပွေ့ောငျး သှားပွီ ဖွဈသညျ။
သို့ သျော မွနျ မာ ပွညျ မှ ထှကျပွေး လာသော စဈပွေးဒုက်ခသညျမြား မှာ ၎င်းငျး
တို့ နှငျ့ လိုကျပါ ခှငျ့ မရဘဲ နယျစပျ အနီးပတျဝနျးကငျြ ၌ သာ တောငျတငျနေ
ထူးခွားသညျ မှာ မုံးကိုးမွို့ ၌ ဤမြှ ပွငျးထနျသော တိုကျပှဲ မြားဖွဈပှားနေ သျော
လညျး ပွညျတှငျး ပွညျပ ရှိ ဗမာ မီဒီယာ မြားပျေါ တှငျ မုံးကိုးအရေး သတငျး
ဖျေါပွမှု မှာ မရှိ သလောကျပငျဖွဈသညျ။ (မွဝတီ၊MRTV ကိုးကားသတငျး
ယခု သတငျးရေးသားနေ ခြိနျ (၃၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ နံနကျ (၉းဝဝ)နာရီအခြိနျ
မွနျမာ တပျမှ မုံးကိုးမွို့ အား ဂကျြတိုကျလယောဉျမြားဖွငျ့ အပွငျးအထနျ လာ
ရောကျဗုံးကွဲနေ ပွီဖွဈသညျ အိမျအခြို့ မီးလောငျ နသေညျ ကို တရုတျ ဖကျခွမျး
(ဓါတျပုံ-(၂၊၁၂၊၂၀၁၆) ရကျနေ့ ဂကျြဖွငျ့ ဗုံးကွဲသဖွငျ့ မီးလောငျနေ သော
မုံကိုးမွို့ ၊ တရုတျပွညျသို့ စဈပွေးနရေ သော မုံကိုးဒသေခံ အခြို့။)